I-CZH CZE-T251 0-25W amandla ahlengahlengiswayo kwiNtshatsheli yoKhozo kuMsasazi we-radio stereo +1/4 GP i-antenna 30m ikhebula le-CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supporter Ukunxibelelana: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » iimveliso » FM Transmitter » 25W / 30W / 50W » I-CZH CZE-T251 0-25W amandla ahlengahlengiswayo oMsakazo we-Stereo usasazo lwe-stereo +1/4 GP i-antenna 30m ikiti yekhebula
I-CZH CZE-T251 0-25W amandla ahlengahlengiswayo oMsakazo we-Stereo usasazo lwe-stereo +1/4 GP i-antenna 30m ikiti yekhebula
iindidi:25W / 30W / 50W
Entsha !! I-CZH CZE-T251: Inokulungiswa 0-25W Ingcali ye-FM stereo yosasazo yokuhambisa + 1/4 GP i-antenna kit DHL EMS UPS FEDEX Brand yokuhambisa yasimahla: CZH UPC: 700987797275 Qiniseka ukuba uyandidibanisa kuludwe lwakho! IIMPAWU ...
U-FMUSER FU-25A 0-25WUsasazo lomsakazo we-radio stereo usasazo + u-antenna ojikelezwe yimbonakalo
U-FMUSER FU-25A 0-25WUsasazo lomsakazo we-FM stereo transmitte + imoto ye-sucker antenna + umbane
I-FMUSER FU-25A 0-25W Ingcali ye-FM stereo yosasazo ye-transmitte + 1/2 ye-wavele iplele antenna + amandla ombane
U-FMUSER FU-25A 0-25W Usasazo lwestudiyo kwi-radio stereo
U-FMUSER 0.5w FU-05B we-transmitter kit yeTransMITTER +1/4 wave we-GP antenna + umbane
I-CZH CZE-T251 0-25W amandla ahlengahlengiswayo oMsakazo we-radio stereo yosasazo +1/2 isiphelo sente i-antenna kit FMUSER
I-CZH-15A (Isilivere) I-15W ye-FM stereo yosasazo ye-PLL yosasazo + 1/4 GP i-antenna kit
iirobio zerhasi 2013/03/05 ngo-01: 18:58
admin 2013/03/06 ngo-09: 37:52
wamkelekile ukuba ube neodolo.I-imeyile yam yile kitmanlaw@gmail.com
i-rogerio 2013/03/13 ngo-13: 02:33
Alexander 2013/03/27 ngo-18: 26:57
Ndingathanda ukuthenga i-CZH-T251 0-25W yamandla ombane eguqulwayo kwi-radio stereo ye-radio +1/4 GP.
admin 2013/04/08 ngo-04: 24:03
wamkelekile ukuba ube noku-odola.ndiya kuthumela ipakheji kuwe nge-ems.c uyayihlawula?
Blake Nikolic 2014/01/08 ngo-22: 33:36
Ndikhangela i-10w ukuya ku-25w FM Transmitter ukuze ndiyisebenzise kwiradiya eyi-5- 10km.
Iyunithi kufuneka ibe namandla aguqukayo (ii-watts).
Bendijonge kwi-CZH-10A, ST-15M okanye kwi-CZH-T251. Leliphi icandelo ocebisa ukuba lisebenze?
Ndifuna ikhithi enamandla kunye ne-antenna. Ndicwangcisa ukubeka i-antenna kwisiphatho esine-5metre, ngoko ke ukuba ndiyadingeka, ndiza kudinga intambo efanelekileyo.
Unganceda undixelele ixesha lokuhanjiswa kunye nexabiso elithunyelwe eBrisbane, Queensland, Australia 4000.
admin 2014/01/09 ngo-07: 35:23
Ndicinga ukuba ungayisebenzisa le 25w kit kunye ne-gp antenna kunye ne-8m cable.
Emva kokuba uyihlawulele, ndiza kuthumela kuwe nge-DHL.Ungafumana iphakheji ngeentsuku ezi-5.
bogey 2018/08/11 ngo-11: 38:05
Molo, yonke into ihamba ngokugqibeleleyo .Siyabulela